Ny Asus ZenFone Max Pro M2 dia mandray ny app Digital Wellbeing | Androidsis
Ny Asus ZenFone Max Pro M2 dia mandray ny fampiharana Digital Wellbeing noho ny fanavaozana farany
Digital Wellbeing dia rindrambaiko niandohany Android Pie ary manolotra statistika amin'ny antsipiriany momba ny fampiasana izay omena ny terminal, mamela hametraka fetr'andro amin'ny fampiharana apetraka ao aminy. Saika ny finday rehetra izay misy ny kinova amin'ilay OS voalaza etsy ambony dia manana azy io hatrany am-boalohany, saingy tsy afaka manao toy izany amin'ny sasany ianao, toy ny Asus ZenFone Max Pro M2, ohatra, fa, na dia nahazo azy tamin'ny volana aprily lasa teo tamin'ity taona ity aza, dia nanao izany tsy nisy io asa io.
fa Ankehitriny dia afaka mirehareha amin'ny fampiharana Digital Wellbeing ilay fitaovana (fantatra amin'izany fomba izany amin'ny teny Anglisy), ary noho ny fanavaozana farany azonao amin'izao fotoana izao, izay koa feno amboarina amboarina maro.
Tonga soa aman-tsara ao amin'ny ZenFone Max Pro M2 ny fahasambarana nomerika ambanin'ny kinova firmware 16.2017.1906.066 vaovao. Ankoatr'izay, zava-baovao iray hafa ampiharin'ny fanavaozana ny patch Google's fiarovana hatramin'ny Jona 2019 ho an'ny finday. Ilaina ireo mba hanomezana ny finday fiarovana farany farany ary hitazomana izany hatrany.
Etsy ankilany, araka ny efa nolazainay, misy fanitsiana isan-karazany sy fanamboarana bibikely. Ireto avy ny lohan'ny fanovana fanavaozana:
Tsy mainty intsony ny kisary fanidiana ao amin'ny maody maizina.
Misy kisary vaovao amin'ny radio FM.
Tsy ambany intsony ny hamafin'ny hovitrovitra.
Ny haavon'ny haavon'ny haavon'ny headphones dia raikitra.
Amin'izao fotoana izao ny firmware vaovao ho an'ny Asus ZenFone Max Pro M2 dia mipaka any Japon, fa andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy kosa vao ho tonga amin'ny unité rehetra izy. Mandritra izany fotoana izany dia azonao atao ny misintona azy amin'ny tanana amin'ny alàlan'ity rohy manaraka avelantsika eto ambany ity, mba hametrahana azy avy eo:
Vaovao farany 16.2017.1906.066 ho an'ny Asus ZenFone Max Pro M2 (1.55 GB)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Asus ZenFone Max Pro M2 dia mandray ny fampiharana Digital Wellbeing noho ny fanavaozana farany
Manampy dokam-barotra amin'ireo fampiharana ao amin'ny Android Share i Microsoft
Miezaha manao ilay osilahy adala mandeha eo amin'ny vodiny amin'ny Walk Master mahafinaritra